ကုံ၏လက္ခဏာသက်သေအောက်မှာအဘယျသို့သတ္တုနှင့်ကျောက်များငှါလာသလော | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သတ္တုနှင့်ကျောက်တုံးများကရာသီခွင်အရသိရသည်မရွေးမ, နှင့်အထွေထွေအတွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသာ horoscope ။ ဒါဟာအစကထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအရာများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသော Aquarius ကိုရက်၊ ပတ်၊ လ၊ ! ဟုတ်ကဲ့! တောင်မှငါကဥပဒေ - Aquarius နတ်ဘုရားများနှင့်အခြားလူများနှင့်အတူပေါ်လာ၏ ... ဟုတ်တယ်, ငါကအခြားသူများမှ !! ! ဒါပေမယ့်ငါက Aquarius အကြောင်းကိုအများကြီးသိ ... သူတို့ကအရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီးလှတယ် !! ! အားလုံး Aquarius ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ကြသည် !!!! ရေနံချောင်း
(21 ဇန်နဝါရီ - ဖေဖော်ဝါရီလ 19)
ကျောက်များ: agate, aquamarine, နီလာခရမ်းရောင်, ကားမျက်ရွဲ, စိမ်း, hyacinth, သလဲ demantoid (အစိမ်းရောင် garnet), ပုလဲ, မြ, လင်းကျောက်, ပန်းရောင်, မီးကျောက်, သန္တာ, lapis lazuli, ကျောက်စိမ်း, မီးတောင်, opal, နီလာ, ရှဟံ, carnelian, Hawkeye, uvarovite (မြအစိမ်းရောင် garnet), fluorite, chrysoprase, ကျောက်သလင်း, citrine, နဂါးသွဲ့။
သတ္တု: လူမီနီယံ, သံလိုက် (သံလိုက်သံ) သံလိုက် hematite (bloodstone), ခဲ, ငွေ, တိုက်တေနီယမ်နှင့်သတ္တုစပ် သိ. ။
အစွမ်းထက်သောအဆောင်လက်ဖွဲ့ - ငွေဘောင်ထဲ၌ rhinestone - လက်စွပ်သည်သင်၏လက်ယာလက်စွပ်ပေါ်တွင်ထိုင်ရမည်။ ကျောက်၏မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ။
နေကြတယ်ကြည်လင်တောင်ကြီးတောင်ငယ်သကဲ့သို့, လူတစ်ဦး sverhvospriimchivym အောင်၎င်း၏အာဏာကိုများပြားစေ။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်အာရုံခံစွမ်းရည်, telepathic အဆက်အသွယ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အကွာအဝေးမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ခွေး, မြင်း, စသည်တို့ကိုအဆိုပါပိုကြီးတဲ့ဟာကြည်လင်, ပိုကောင်း .. ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးအခမဲ့ဖြစ်ရမည်: တချို့လူတွေကကြည်လင် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်မှတဆင့်၎င်းတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုခေါ်လိမ့်မည်။ ယခုဖက်ရှင်ဖြစ်လာပြီသောပရောဖက်လုပ်သူများအဘို့ပြုရန်အသုံးပြုရော့ခ်ကြည်လင်ဘောလုံး။ ဘောလုံးကိုတိကျစွာအာရုံခံစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးသည်ကြောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်သောကျောက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်, နားလည်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း, unsaid နားလည်ရန်, ဝှက်ထားသောကြည့်ဖို့, လူတွေနှငျ့ဆကျသှယျနိုင်စွမ်းတတ်၏။ ဥရောပတစ်လွှားသည်ကြည်လင်၏ရှေးဟောင်း Charm ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးလက်ကောက်ရယူသကဲ့သို့သတ္တုအတွက်ပြန်လည်သေးငယ်တဲ့ကျောက်သလင်းဘောလုံးမကြာခဏငွေ, connected: သူတို့ကအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအများသည်အိမ်၌အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခဲယဉ်းသောအရွယ်အစား (သို့) ကြည်လင်သောစုတ်တံများကိုအိမ်တွင်ထားရှိရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းပြီးတောက်ပသောစွမ်းအင်သည်အာကာသထဲသို့စီးဆင်းသည်။ ၎င်းသည်ကျောက်သလင်းကျောက်ခဲများသာမကဘဲအခြားကျောက်ဆောင်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရရှိရန်ခဲယဉ်းပါကသင်သည်တစ်စက်သို့မဟုတ်ဘဲဥပုံ၏ပုံသဏ္useာန်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘောလုံးသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သော်လည်းစွမ်းအင်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အမှန်စင်စစ်ကျောက်ဆောင်ကြည်လင်ခြင်းသည်cosာစွမ်းအင်၏ကြီးမားသောမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ကျောက်တုံးသည်ထူးခြားသောရက်ရောမှုရှိသည်။ ဒstနပညာရှင်၏ကျောက်ကိုရှာဖွေရာတွင် Crystal ကို Alchemy တွင်မကြာခဏအသုံးပြုခဲ့သည်။ Crystal ဖန်ထည် (ဤသည်သည်သဘာဝကျောက်ဆောင်မဟုတ်သော်လည်းအတုဖြစ်သည်) အစုလိုက်အပြုံလိုက်စတင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကျောက်ဆောင် (အခြားအဖိုးတန်သောသားပေါက်များနှင့်ကျောက်တုံးများ) မှကျန်းမာရေးအလှူရှင်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအတုကြည်လင်သောဤဂုဏ်သတ္တိများလည်းရှိသည်၊ ရောမ၏မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ထုံးတမ်းစဉ်လာသည်ကျောက်ဆောင်ကျောက်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောလုံးများဖြင့်လက်ကိုအေးအောင်ပျံ့နှံ့စေသည်။ အချိုရည်များနှင့်ဝိုင်များကိုအအေးခံရန်အတွက်ဘောလုံးများသို့မဟုတ်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရာများကိုရေယာဉ်များတွင်ထည့်ထားသည်။
ရွှေဝတ်ဆင်ဘယ်တော့မှ !! ! ဒါဟာသင့်အတွက်အန္တရာယ်များပါ! ဒါပေမယ့်အမြဲကံကောင်းပါစေယုံကြည် !! ! သူမသည်သစ်ကိုနှစျတှငျသငျသညျမသွားပါစေလိမ့်မယ် !!!! သငျသညျပျော်ရွှင်မှုများနှင့်ချစ်ကြ!
Vyara Gavrilova အခမဲ့ကောင်းမွန်သောယုံကြည်ခြင်းက =
Posted in, Horoscopes
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,258 စက္ကန့်ကျော် Generate ။